Wararka Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ugu Danbeeyay Ee Ay Wargaysada Yurub Ka Qoreen Maanta Oo Talaado Ah. - Gool24.Net
Wararka Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ugu Danbeeyay Ee Ay Wargaysada Yurub Ka Qoreen Maanta Oo Talaado Ah.
Ciid mubaarak kulu caam wa antum bilkhayr, idilkiinba salaan akhristayasha sharafta lahow kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wararka suuqa kala iibsiga iyo waxyaabihii ay wargaysyada Yurub ka qoreen maanta oo Talaada ah.
Shabakada Gool24 oo aad uga barateen in ay marakasta si joogto ah idiinla socodsiiso wararka suuqa ayaa halkan idiinku soo ururisay wararkii ugu danbeeyay ee suuqa iyo waxyaabihii ay maanta oo talaado ah ka qoreen xidigaha la kala doonayo.
Wararka Suuqa Daily Mirror:
Juventus ayaa kooxaha Barcelona, PSG iyo Man United kula soo biirtay tartanka loogu jiro kabtan kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt kaas oo lagu qiimaynayo 75 milyan gini taas oo tartanka sii xoojinaysa.
Tottenham ayaa samaynaysa hawlgal wayn oo dhinaca suuqa ah waxayna doonaysa saxiixyada xidiga kala ah James Maddison, Maxi Gomez, Giovani Lo Celso, Tanguy Ndombele iyo Ryan Sessegnon.
Manchester United ayaa kooxda Crystal Palace wax ka waydiinaysa sida lagu heli karo difaaca midig ee Aaron Wan-Bissaka waxayna United qaboojisay xiisihii ay u haysay difaaca Tottenham ee Kieran Trippier.
Paris Saint-Germain ayaa xiisaynaysa gool dhaliyaha ay Man United doonayso in uu kooxdeeda ka baxo ee Romelu Lukaku kaas oo markii hore lala xidhiidhinayay Inter Milan.
Difaaca kooxda Napoli ee Elseid Hysaj ayaa rajo wayn u abuuray kooxaha Premier league ee xiisanayay kadib markii uu sheegay in uu doonayo sidii uu xagaagan uga bixi lahaa Serie A.
Kooxaha Manchester United, Manchester City iyo Real Madrid ayaa ku dagaalamaya saxiixa da’yarka kooxda Benfica ee Joao Felix kaas oo lagu iibsan karo 120 milyan yuro.
Liverpool ayaa heshiis cusub u soo bandhigtay xidiga wacdaraha soo dhigay ee Divock Origi waxayna Reds kalsooni ku qabtaa in ay Origi ku qancin doonaan in uu mustaqbalkiisa waqtiga dheer u huro kooxdeeda.
Inter Milan ayaa diyaar u ah in ay tijaabiso iska caabinta kooxda West Ham ee saxiixa gool dhaliyaha Marko Arnautovic.
Manchester City ayaa doonaysa in ay difaaca midig ee Juventus ee Joao Cancelo kula soo wareego 50 milyan gini.
Maurizio Sarri ayaa doonaya in uu Manchester United ku garaaco saxiixa difaaca kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly kaas oo uu doonayo in uu Juventus kula soo saxiixdo.
Xidiga kooxda Everton iyo xulka Brazil ee Richarlison ayaa qirtay in ay farxad galinayso wararka Man United la xidhiidhinaya laakiin waxa uu ku adkaystay in uu ku faraxsan yahay Everton.
SIDOO KALE AKHRISO: "Anagu Waligay Ma Doonayno Inaanu Liverpool La Ciyaarno" - Unai Emery Oo Qaab Kaftan Ah Uga Sii Deyriyay Kulanka Ay Reds Booqanayaan Sabtida.
Kooxaha Real Madrid, Bayern Munich iyo Man United ayaa dhamaantood doonaya saxiixa Mohamed Salah oo lagu qiimaynayo 180 milyan gini inta lagu jiro suuqa xagaagan.
Arsenal ayaa wada xajood la yeelatay kooxda Paris Saint-Germain ee Thomas Meunier kaas oo ay ku doonayso 20 milyan gini laakiin in Gunners ay ka maqan tahay Champions League ayaa guuldaro u keeni karta.
Kooxda Sevilla ayaa ku dhaw in ay tababaraha kooxdeeda u magacowdo macalinkii shaqada Madrid laga caydhiyay ee Julen Lopetegui si uu badal ugu noqdo Joaquin Caparros oo shaqada Sevilla iska casilay.
Arsenal ayaa dalab ka gudbinaysa labada xidig ee kooxda Sampdoria ee Dennis Praet iyo Joachim Andersen kuwaas oo ay ku doonayso 37 milyan gini.(Daily Star)
Manchester United ayaa bartilmaameedsanaysa xidiga kooxda Leicester City ee James Maddison kaas oo ay 60 milyan gini ka bixin karto.
Arsenal ayaa dagaal kala kulmaysa sidii ay kooxdeeda ugu sii hayn lahayd gool dhaliyaha reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang kaas oo ay markale kooxaha reer China doonayaan iyaga oo u soo bandhigaya mushaar 300,000 kun oo gini ah todobaadkii.(The Times)
SIDOO KALE AKHRISO: Halyeey Arsenal Ah Oo Shaaciyay In Gunners Ay Milyan Mayl Ka Danbeyso Liverpool Ka Hor Kulankooda Sabtida
Chelsea ayaa badalka Maurizio Sarri ka dhigan karta tababaraha kooxda Watford ee Javi Gracia haddii uu Sarri ka baxo Stamford Bridge oo uu Juventus ku biiro.(ESPN)
Kooxda Juventus ayaa heshiis saddex sanadood ah ka saxiixan doonta Maurizio Sarri kaas oo sanadkii mushaar ahaan u qaadan doona 7 milyan yuro oo u dhiganta 6.22 milyan gini. (Corriere della Sera)
Eden Hazard ayaa rajaynaya in maalinta taladaada la dhamaystiri doono heshiiskiisa Real Madrid inkasta oo ay wali jirto fari lacag 26 milyan gini ah oo u dhexeeya inta ay Chelsea ku doonayso iyo lacagta ay Madrid ku doonayso.(Evening Standard)
Juventus ayaa xiisaynaysa in ay dib ula soo saxiixato xidigii hore ee kooxdeeda ee Pual Pogba iyada oo wakiilkiisa Mino Raiola uu markale Juventus ka caawinayo in ay Pogba dib ula saxiixdaan. (Sky Italy)
Mulkiilaha ahna madax waynaha kooxda PSG ee Nasser Al Khelaifi ayaa magaalada Doha waxa uu wada xaajood ugula jiraa mulkiilaha kooxda Leeds United si uu u iibsado kooxd reer Ingiriis ee heerka labaad ka ciyaarta.(L’Equipe )
Madax waynaha kooxda Bayern Munich ee Uli Hoeness ayaa cadeeyay in ay kooxdiisu ku guuldaraysatay saxiixa xidiga Man City ee Leroy Sane kadib markii ay qiimo waali ah dul dhigtay Man City.